O wutere ya na dọkịta ya n'ihi ịdị arọ ya, a chọpụtara na ọ nwere ọrịa cancer nke atọ - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
Mgbe Amanda Lee kpebiri ịhụ dọkịta ọkachamara na-eso mgbu na-egbu mgbu nke afọ ya, ọ tụghị anya nrịanrịa nke nchoputa n'aka dọkịta ya nke leghaara mgbaàmà ya anya, dị ka o kwuru. Taa.
Amanda Lee nwere oke ihe mgbu afọ na nsogbu nke eriri afọ. Isi Iyi: Taa
Ọ furu efu pound 15 ngwa ngwa
Mgbe na-agbalị niile ịgba akwụkwọ maka belata ihe mgbu afọ N’enweghi ihe ịga nke ọma, Amanda kpebiri ịhụ onye na-ahụ maka ọrịa shuga n’akụkụ ụlọ ya na Los Angeles, na-enwe olileanya imeri nhụjuanya ya wee nweta ọgwụgwọ maka mkpasu iwe afọ ya. Ọrịa ya mere ka ọ dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilogram 15 ngwa ngwa.
Nwa agbọghọ ahụ chere na dọkịta ya wedara ya ala
Olileanya ya maka ọgwụgwọ ghọrọ ihe ndakpọ olileanya n'oge ndụmọdụ ya na ọkachamara ahụ. Nke ikpeazụ, kama ịbawanye n'ime nyocha ya, jiri mgbaàmà ya gwuo egwu. Ọ laghị azụ ịgwa nwa agbọghọ ahụ na ọ bụghị ihe jọgburu onwe ya nke na ọ gaghị eri n’ihi ihe mgbu ya. “Ọ nọ na-eto eziokwu ahụ bụ na anaghị m eri nri,” ka o kwuru. Dị ka Amanda si kwuo, ọ gbakwụnyere na iri naanị nri ndị nwere ike ịgbari ngwa ngwa dị ka poteto a sụrụ asụ ga-abụ ngọzi na ọ dị ka ọ gaghị enwe nsogbu na-edozi ahụ.
Dọkịta ahụ eyighị ka ọ dị mkpa ịme nyocha ma ọ bụ nyocha ọzọ ma nye Amanda ọgwụ nke gụnyere ọgwụgwọ maka ọrịa urinary tract.
Mmetụta ihere nke dọkịta kwuru banyere ibu ya, Nwa agbọghọ ahụ hapụrụ ọfịs dọkịta ahụ na anya mmiri n'anya ya; obi gbawara ya. Mgbe nke a gasịrị, o mere vidiyo nke onwe ya nke ọ na-ekwu maka ahụmịhe ya na dọkịta a, nke o bipụtara na TikTok.
Amanda Lee chọpụtara na ọ nwere ọrịa kansa
Amanda Lee ya na dibia bekee. Isi Iyi: Taa
Mgbe ọtụtụ ndị ikwu ya gwara ya ka ọ gaa hụ dọkịta ọzọ, nwa agbọghọ ahụ nwere ike ịhọpụta onye ọkachamara ọzọ. Dr Tahmina Haq, onye ghọtara ngwa ngwa na nsogbu ahụike ya abụghị ihe kpatara ibu ya, gwara ya ka o mee ihe mberede. Nsonaazụ adịghị anya na ọbịbịa: ọ bụ nnukwu akpụ na eriri afọ. Nwa agbọghọ a natara ihe a nyocha ọrịa kansa eriri afọ agba 3 nke gbasaa na ngwunye lymph ya.
Nwa agbọghọ ahụ na-anata ọgwụgwọ ugbu a ọbụlagodi na ọ siri ike, ọ na-ekwu na ọ bụ ụgwọ iji kwụọ ụgwọ iji dịrị ndụ. Otú ọ dị, ọ na-ewute eziokwu na ya na ndị dọkịta na-enwebeghị ike igbu ọtụtụ afọ chọpụta ọrịa ya n'ihi na ọ dị obere ma dị arọ ma n'echiche nke ahụ Ọrịa cancer na-adịkarịghị emetụta ndị na-eto eto.
Ọkpụkpụ agba agba nke ọdụdụ nwa
N'ime afọ 35 gara aga, ọrịa a na-ebelata na ndị ọrịa toro eto n'ihi colonoscopies mgbe niile ma ọ bụ obere ị smokingụ sịga. Otú ọ dị, enwere mmụba na ọrịa cancer na-eto eto na nke ọdụdụ nwa. Iji mezuo nke a, ihe karịrị ndị ọkà mmụta sayensị 400 zutere iji gbanwee echiche banyere ụdị ọrịa kansa a na ndị na-eto eto ma chọpụta ihe ize ndụ yana ihe na-akpata ọrịa a na-eto eto. Dabere na Dr Kimmie Ng site na Dana-Farber Cancer Institute, ụfọdụ ọrịa mkpụrụ ndụ ihe nketa dị ka ọrịa Lynch na ezinụlọ adenomatous polyposis na-eme ka ohere nke ịmalite ọrịa cancer na-amalite n'oge mbụ, na 10-20% nke ọrịa cancer ndị a bụ n'ihi ihe nketa.
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.santeplusmag.com/humiliee-par-son-medecin-a-cause-de-son-poids-elle-est-diagnostique-avec-un-cancer-du-colon -de -stage-3 /
TELES RELAY 52644 posts 1 comments